अदालतमा आजै थुनछेक बहस हुनसक्ने, रवि धरौटीमा छुट्ने सम्भावना ! - Everest Dainik - News from Nepal
अदालतमा आजै थुनछेक बहस हुनसक्ने, रवि धरौटीमा छुट्ने सम्भावना !
चितवनः चितवन प्रहरीले अनुसन्धानको सबै तथ्यसहित तयार पारेका मिसिलसहित आजै मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ ।
शालिक राम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएका रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीलाई सरकारी वकिल कार्यालयले आजै अदालतमा पेश गर्ने र आज नै थुनछेक बहस हुनसक्ने अधिवक्ता गोपिलाल देवकोटाले जानकारी दिए ।
आज थुनछेक बहस नभएको खण्डमा भने रवि लामिछानेलाई थप हिरासतमा राखिने अवस्था रहेका बताइन्छ ।
आज थुनछेक बहस सकिएको खण्डमा रवि लामिछाने धरौटीमा रिहा हुने सम्भावना बढेको हो । तर अदालतमा बहस गर्ने वकिलहरुको संख्या ठूलो भएका कारण आज नै आदेश नहुने सम्भावना समेत रहेको छ । यस्तोमा हेर्दाहेर्दैमा मुद्दाको निर्णय राखेर भोली फेरी बहस हुन सक्छ ।
याे पनि पढ्नुस टेलिभिजनमा प्रवेश गरी पत्रकारलाई पक्राउ र दुर्व्यवहार गरेकोप्रति महासंघको अपत्ति
आज अन्तीम दिन प्रहरीले अनुसन्धान राय प्रतिवेदनसहितको मिसिल सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रहरीले मिसिल बुझाएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोग पत्र अदालतमा पेस गर्नेछ । त्यसपछि आजै थुनछेक बहस हुने अधिवक्ता गोपिलाल देवकोटाले जानकारी दिए । थुनछेक बहसपछि अदालतले रिहा वा कारागार चलान गर्ने आदेश दिनेछन् । देवकोटाका अनुसार अदालतले आजै वा भोली मात्रै आदेश दिनसक्ने सम्भावना रहेको छ । जाहेरीवालाको तर्फबाट ५ जना अधिवक्ताले बहस गर्ने बताईएको छ ।
याे पनि पढ्नुस रविमाथिको अभियोग प्रमाणित हुने मनासिब आधार– अदालत, अस्मिता बिना धरौटी रिहा